Forex Forecast Poll - Poll mialoha ny vola
Home / Trading / Forex Tools / Currencies
Ny volanao isam-bolana
Ny Forecast Poll dia fitaovana am-pihetseham-po izay manasongadina ny vola eo antenantenany amin'ny androm-panafarana ny tadiavin'ny mpanazatra ara-tsiantifika.
Ny mari-pahaizana momba ny fifidianana amin'ny fifidianana dia avy amin'ny tantara dimy taona mifandraika amin'ny paosin'ny roa FMF. Ny fanadihadiana dia atao isaky ny zoma ary navoaka tao amin'ny 15: 00 GMT. Ny fanadihadiana dia navoaka nandritra ny fotoana rehetra: herintaona, iray volana, iray ampahefatra ary anisany ny vidin'ny vidiny isaky ny horizon. Ity voka-pifidianana ity dia afaka arahan'ireo mpivarotra, mpilatsaka ho fidiana ho an'ny tsena ary ny academics.
Amin'ny alalan'ity widget ity, ny mpanjifanay dia afaka mahazo ny vokatra miavaka. Fanehoana fihetseham-po izy io izay manasongadina ny toe-tsaina manakaiky sy mahazatra voafantina ary manitsy ny fironana. Tsy tokony horaisina ho marika na ho lasibatra farany izy io, fa amin'ny sarintanin'ny toetr'andro izay ahitana ny fihetseham-po sy ny andrasana.
Tsy misy ny fiatrehana ny angon-drakitra; ny fitomboana dia voaangona ary avy eo navotsotra avy hatrany, ho toy ny mari-pamantarana tsy mitombina, dia tsy misy faharetana. Noho izany dia fitaovana tena ilainy izany raha ampifandraisina amin'ny angona ara-teknika na fototra ifandramana.
Ity fitsapan-kevitra lavareny ity dia manome ny antonta-kevitra momba ny fihetseham-po, mifototra amin'ny santionan'ny solontena avy amin'ny mpanolo-tsaina dimy amby roapolo ka hatramin'ny dimampolo, ao anatin'ny dimy taona.
Ny mpivarotra dia mampiseho toetra mitovy amin'ny fitondrantenan'olombelona amin'ny sehatra maro; Ny antony dia ny fanenjehana ny vahoaka eny an-tsena. Ny indimetimety malefaka anefa dia afaka mampiroborobo ny fisainana mifanohitra. Amin'ny fampiasana an'io fitaovana io, ny mpanjifa dia afaka mamantatra ireo fihetseham-po ara-pihetseham-po ary noho izany aza misoroka ny fisainan'ny saina.
Vola Forcast Poll